Wararka Maanta: Talaado, Nov 23, 2021-Abiyi Axmed oo sheegay inuu dagaalka ka qaybgalayo, xilli lagu soo dhawaaday Addis Ababa
Sidoo kale kulankaas xisbiga Barwaaqo ayaa lagu go'aamiyay in xubin kasta oo xisbiga kamid ah, uu tagi doono furimaha hore ee dagaalka, kaas oo ay dowladdu kula jirto kooxda TPLF oo gacan ka helaysa Jabhadda Xoraynta Oromiya ee OLA.
Dhinaca kale waxaa maalinimadii shalay furimaha hore ee dagaalka lageeyay Ciidamada Booliska Fadaraalka Itoobiya, kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqdaan hawlgallada ka dhanka ah kooxda TPLF.
Ra'iisal Wasaare Abiyi Axmed oo ah abbaanduulaha guud ee Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya, ayaa hadallo kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri " Itoobiya waxa ay taariikh dheer u leedahay ilaalinta magaca xoriyadda iyo madax bannaanida waddanka".
Hadallada Abiyi Axmed ayaa u muuqda kuwo uu ku dhiiragalinayo ciidamada difaaca ee dagaalka ku jira, iyo waliba in uu ku muujiyo inay ka go'an tahay inuu hogaamiyo ciidamada difaaca ee dagaalka kula jira TPLF, isla markaana uu dhiso mooraalka ciidamada kala duwan ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka ka dhanka ah TPLF.
Geesta kale kooxda TPLF ayaa majaajilo ku tilmaantay hadallada kasoo yeeray xukuumadda Abiyi Axmed, waxayna sheegeen inay sii wadayaan waxay ugu yeereen halganka cunaqabataynta lagaga qaadayo Tigray.
Dhinaca kale safaaradaha dalal dhawr ah oo Mareekanku ku jiro ayaa muwaadiniintooda ku sugan Itoobiya, ugu baaqay inay dalka Itoobiya isaga baxaan intay goori goor tahay, waxayna sheegeen in hadhaw ay ku adkaanayso safaaraddu inay muwaadiniinta u fududayso sidii ay uga bixi lahaayeen dalka Itoobiya.
Hadallada Abiyi Axmed ayaa imaanaya un xilli kooxda TPLF ay sheeganayso inay usoo dhawaatay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, isla markaana ay sheegayaan inay sii wadayaan duulaankooda ka dhanka ah, xukuumadda uu majaraha u hayo Abiyi Axmed.